Xog: Isbaheysiga mucaaradka SOMALILAND oo wajahaya culeys hor leh + Sababta - (HILLAAC.NET) THE BEST INDEPENDENT RELIABLE SOMALI NEWS
July 22, 2021 at 05:00 Xog: Isbaheysiga mucaaradka SOMALILAND oo wajahaya culeys hor leh + Sababta2021-07-22T05:00:06+02:00 WARARKA SOOMAALIYA
Hargeysa (Caasimada Online) – Isbaheysiga Xisbiyada mucaaridka Somaliland ee horaanta bishii hore lagu dhawaaqay ayaa xiligan wajahaya culeys hor leh, oo fashilin kara qorshihii uu mucaaridka ka lahaa isbaheysigaas, sida ay ogaatay Caasimada Online.
Xubno sarre oo ka tirsan xisbiyada Waddani iyo Ucid oo la hadlay Caasimada Online ayaa sheegay in Isbaheysiga mucaaridka uu wajahayo culeys hor leh, midaasi oo uu ka dambeeyo madaxweynaha Somaliland, Muuse Biixi.
“Isbaheysigii mucaaridka wejigiisi koowaad ee hoggaanka golaha deegaanka waa hirgelay, laakiin wajigii labaad ee guddoonka Wakiiladda ayaa fashil ku dhow, waxa soo fara-geliyay madaxweynaha oo isagu dabada ku wata wasiirkiisi hore, wuxuuna ku fan-gareynayaa lacagtii dowladda,” ayuu yiri mid kamid xubnaha mucaaridka ah ee la hadlay Caasimada Online.
The post Xog: Isbaheysiga mucaaradka SOMALILAND oo wajahaya culeys hor leh + Sababta appeared first on Caasimada Online.
« Boorama sidee looga dhigii karaa magaalo dhaqaalaha ugu badan kasoo gali karo dalxiiiska? (WQ: Cabdullaahi Yuusuf)
Video: Imaamka Mudulood oo war kasoo saaray khilaafka ka taagan kursiga Hope141 »